Namaly an'i Joba Andriamanitra
Vakio ny Joba 38. lnona no ampianarin'io toko io antsika momba an'Andriamanitra, tsy amin'ny maha-Mpamorona Azy ihany fa amin'ny maha-Mpamelona azy koa? Manao ahoana no tokony ho fiantraikan'io fahamarinana lehibe io eo amin'ny fahazoantsika ny atao hoe haikanto sy siansa?
Ampianarina matetika fa manana aina sy hery ho azy ny natiora, ka dia misosa fotsiny, mizotra manaraka ireny lalàna tsy miova sy tsy azon'Andriamanitra ialana ireny izy. Izany fampianaran-diso izany dia tsy eken'ny Tenin'Andriamanitra mihitsy. Ny zavaboary dia mpanompon'Ilay Mpahary azy (...) Maneho fahendrena sy fanatrehana ary hery miasa araka ny lalàn'ny zavaboary izay manambara ny asa tsy miato ataon'ny Ray sy ny Zanaka. Hoy i Jesôsy: `Ary Raiko miasa mandraka ankehitriny, ary Izaho - PM, tt. 95,96.
Mampalahelo anefa, araka ny voalaza teo aloha, fa ny ankamaroan'ny fikarohana ara-tsiansa dia mifototra amin'ny zavatra ara-nofo sy amin'ny finoana ny tsy fisian'Andriamanitra. Midika izany fa afaka mahita zavatra tena kanto sy lafatra ary koa saro-takarina ny mpahay siansa, kanefa mbola milaza ihany izy ireo fa vokatry ny kisendrasendra izany ary tsy nisy fikasana na sitrapo namorona izany.
Raha ny marina dia izany mandrakariva no ankalazain'ny siansa. Ny fiainana eto an-tany, miaraka amin'ny hakantony sy ny maha-saro-takarina azy, manomboka amin'ny lolo kely ka hatramin'ny olombelona, izay ambarany fa vokatry ny tranga simika efa an'arivony tapitrisa taona lasa. Teo, hoy ihany izy, no nisian'ny sela iray niforona izay nandalo fiovana ka tamin'ny alalan'ny sivana ataon'ny zavaboary no nivoarany, ary io no nampisy izao zava-manana aina sy mihetsika rehetra hitantsika izao.
Manambara ny siansa ankehitriny fa ny fiheverana ny fisian'ny Mpamorona izay manana hery mihoatra ny an'ny olombelona dia fiheverana "tsy siantifika", satria tsy azo porofoina ara-tsiansa, ka tsy azon'ny siansa idirana ny momba izany. Raha ny siansa dia tsy mampianatra izany hevitra izany (toa mampianatra ny mifanohitra amin'izany tokoa mantsy ny siansa satria ny hakanton'izao tontolo izao sy ny maha-saro-takarina azy dia maneho ny fisian'ny Mpamorona iray), saingy ny mpahay siansa kosa no nametraka izany foto-pisainana izany ho fitsipika tsy maintsy arahina.
Ny olana anefa dia mampianatra ny Soratra Masina, fa nahary ny zavatra rehetra Andriamanitra, ary tsy izany ihany fa Izy koa no Mpamelona ny zavatra rehetra. Midika izany fa ny tena fanabeazana kristianina marina rehetra, rehefa mampianatra momba ny siansa, dia tokony hiavaka tanteraka amin'ny fampianarana isan-karazany voizin'ny siansa ankapobeny. Azo antoka ny hisian'ny fifanoherana, indrindra rehefa ny fiandohan'izao rehetra izao no resahina.